ShweMinThar: ထူးကဲသော ကျန်းမာခြင်းအတွက် Full-Body Workout
အကယ်လို့များ သင်ဟာ သင် လေ့ကျင့်နေတဲ့ workout program ကို ဆက်လက် လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အကြောင့်အမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေတော့ဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင် ဘာလို့ Full-body workout program တစ်ခုလောက်ကို မစမ်းကြည့်တာလဲ? သင့်အနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အချိန်ပေးရတဲ့ဟာ နည်းပါးသွားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားလားဗျာ။ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီး ဖတ်သွားပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကြွက်သားတွေကို တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ GYM မှာ အချိန်အများကြီး သွားပေးလိုက်ရတယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မလား။ ဒါပေမယ့်လို့ GYM ကြီးဘဲ ဆော့နေတော့လည်း အဆင်က မပြေပြန်၊ ၀မ်းရေးအတွက်က ရုန်းကန်ရသေးတယ် မဟုတ်လား။ ကောင်းမွန်တဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက အလေးဝန်တွေကို တွန်းထုတ်၊ ဆွဲယူ၊ မတင်တာမျိုးကို နာရီနဲ့ချီပြီး ပြုလုပ်၊ အဲ့ဒါကိုမှ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့၊ တစ်လပြီး တစ်လ၊ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ဖြည်းဖြည်းချင်း တည်ဆောက်သွားမှာ ရတယ်လို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။
အမ်……….. ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့။
သင့်အနေနဲ့ ပြင်းထန်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုမျိုးကိုတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက GYM တော်တော်များများမှာ လိုက်လုပ်ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်း သုံးရက် ဆော့ရမယ် တစ်ရက်နားရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တစ်ပတ်ကို ခြောက်ရက်လုံး ကစားရမယ်။ ဘယ်နှရက် ဆော့မှ ရမယ် ဆိုတာမျိုး နဲ့ ဆိုရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းစဉ် အချိန်ဇယားထဲကို ဒီ ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မယ့်ဟာကို ထည့်ဖို့က အခက်အခဲ ရှိကောင်း ရှိနေလိမ့်မယ်။ မအားရတာနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ပျက်ကွက်ရတာနဲ့ပေါ့။ ဒီတော့ Full-body workout ကို ဘာလို့ အစမ်းကြည့်တာလဲ။ Full-body workout က သင့်အတွက် ကောင်းကောင်းကြီး အလုပ်ဖြစ်သလို၊ သင့်ရဲ့ အချိန်ဇယားမှာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူဘဲ ကွက်တိ ဖြစ်သွားအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ရှိသေးတာက Full-body workout လို့ ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် လူတော်တော်များများ နည်းပြတော်တော်များများက အလေးပေါ့ပေါ့လေးတွေနဲ့ အကြိမ်များများ ဒါမှမဟုတ်လည်း အလေးပေါ့ပေါ့လေးတွေနဲ့ Circuit training ပိုင်းတွေ ပြေးမြင်ပြီး အဲ့ဒါတွေဘဲ လိုက်လုပ် ဒါမှမဟုတ် လိုက်လုပ်စေ တယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ကစားသမားက တခြားသူတွေ လေ့ကျင့်နေတာတွေကို ကြည့်ပြီး ဟိုလိုလည်း ဆော့ချင်၊ ဟိုစက်မှာလည်း ဆော့ချင်၊ ဒီစက်မှာလည်း ဆော့ချင် ဖြစ်ကုန်ကြရော။ ဒါကလည်း လူ့သဘာဝဘဲလေ။ အပြစ်မြင်လို့ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။
အမှန်တကယ်တော့ Full-body workout ဆိုတာက ကစားသမား အနေနဲ့ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရည်မှန်းပြီး စိတ်နဲ့ ခန္ဓာ ဆက်စပ်လို့ ကြွက်သားတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် Heavy Weight တွေနဲ့လည်း ကစားလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး recovery ပိုင်းကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကြီးထွားသန်မာနိုင်ပြီး၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်း ကစားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး overtraining ဆိုတဲ့ အရာကြောင့် အဖိုးတန်လှတဲ့ ကြွက်သားတွေ လောင်ကျွမ်းပျက်စီး သွားခြင်းတွေကိုလည်း ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ Full-Body workout ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာမျိုးကို ဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
Full-Body Workout ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
SAVE TIME ။ ။ ကစားချိန် တစ်ချိန်တည်းမှာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ကိုယ်လုံးကို ကစားလိုက်ချင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ရက် ဖြစ်ဖြစ် သုံးရက်ဖြစ်ဖြစ် ဘဲ GYM မှာ အချိန်ပေးလိုက်ရခြင်း ဆိုတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မအားဘူးဆိုတဲ့ သူများအတွက်ပေါ့။
နောက်တစ်ခုက သင့်အနေနဲ့ ကစားချိန် တစ်ချိန်အတွက် GYM မှာ တစ်နေ့ကို ၁ နာရီလောက်ဘဲ အချိန် ပေးစရာ လိုပါတော့တယ်။ ဒီတော့ တစ်ပတ်ကို GYM မှာ ၂ နာရီ သို့မဟုတ် ၃ နာရီလောက်ဘဲ အချိန်ပေးပြီး ကြွက်သားတွေကို တည်ဆောက်မယ်ပေါ့။ မိုက်တယ်..ဟုတ်?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါတွေက သင့် လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ Quality အကြောင်းပါ။ Quantity အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
Boosts Your Cardiovascular System ။ ။ ကစားချိန် တစ်နာရီ လောက်အတွက်မှာ ကြွက်သားအုပ်စု တစ်ခုအတွက် ၂ ကျော့ ဒါမှမဟုတ် ၄ ကျော့လောက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ညှစ်ပြီး ကစားလိုက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် cardiovascular system ကို လျင်လျင်မြန်မြန်ဘဲ မြင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
Full-Body Workout လေ့ကျင့်ခြင်းအတွက် စည်းကမ်းချက်များ
တစ်ပတ်ကို ၂ ရက် သို့မဟုတ် ၃ ရက် ကစားပေးပါ ။ ။ မိုက်တယ်ဟုတ်။ ဒီလို တစ်ပတ်မှာ ရက်အနည်းငယ်သာ အလေးနဲ့ ကစားလိုက်ခြင်းရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ကတော့ ကြားရက်တွေမှာ Cardio session လေးတွေကို ကစားလို့ ရသွားတာပါ။ အလေးနဲ့ ကစားပြီး နောက်ပိုင်း cardio တွေကို လုပ်နေရမယ့် အစားပေါ့။
အလေးများများနဲ့ ကစားပါ ။ ။ များသောအားဖြင့် Full-body workout ကို ကစားတဲ့ ကစားသမားတွေက သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို မနိုင်မယ့် အလေး နဲ့ ကစားမယ့်အစား အလေးပေါ့ပေါ့လေးတွေနဲ့ ကစားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်မယ့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ အတွက် စွမ်းအင်ကို ချွေတာလိုက်တဲ့ သဘောအနေနဲ့ပေါ့။ အမှန်ကတော့ သင့်အနေနဲ့ Heavy မလေ့ကျင့်ဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ် Program ကိုဘဲ ကစားနေ ကစားနေပါ။ ဒီတော့ သင့်မနိုင်သလောက်အထိကို အလေးတိုး ကစားပါ။ ပုံကျပန်းကျပါဗျာ….နော်။
ကြွက်သားအုပ်စု တစ်ခုအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုကို ကစားပါ ။ ။ ဒီတစ်ခုကတော့ အပြောကလွယ်သလို အရေးလည်း ကြီးပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ဆိုပါစို့။ သင့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအတွက် သင့်မနိုင်တဲ့ အလေးဝန်အထိ အလေးတိုးပြီး ကစားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ အဲ့ဒီ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုဘဲ ပြုလုပ်စရာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ ရင်အုပ်အတွက် ဆိုပါစို့။ Bench Press ဒါမှမဟုတ် Incline Bench Press ပေါ့။
ကျောအတွက်ဆိုရင် Bent-over rows ဒါမှမဟုတ် Chin-Ups ပေါ့။ အောက်ပိုင်းအတွက် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကမှ Squat ကို မမှီပါဘူး။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ က သင့်အနေနဲ့ Heavy Weight တွေနဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်မှ ဖြစ်သလို မဆုံးနိုင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို လေ့ကျင့်စရာ မလိုဘဲ ကြွက်သားပမာဏကို တိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ routines အတွက် စီစဉ်ပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို ၁၀ ကြိမ် ၁၂ ကြိမ် ၂ ကျော့လား ၄ ကျော့လား သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီ။
သင့်ရဲ့ ကစားချိန်ကို တစ်နာရီ သို့မဟုတ် အဲ့ထက် နည်းအောင် စီစဉ်ပါ။ ။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို စီစဉ်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက resistance training က သင့်ရဲ့ musclebuilding hormones အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ။
Compound Exercise တွေကို လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ testosterone level တွေကို သဘာဝအတိုင်း မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း လေ့ကျင့်ချိန် ကြာလာရင် Cortisol လို့ခေါ်တဲ့ Catabolic Hormone ကိုလည်း မြင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ချိန်ကို ချိန်ညှိပြီး ပြင်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်းကသာ လက်မထောင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လေ့ကျင့်ချိန်ကို ၁ နာရီ လောက်မှာဘဲ ထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
လေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်း post-workout shake ကို သုံးပါ ။ ။ Full-body workout လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်အတောအတွင်းမှာဆိုရင် သင့် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် Glycogen ပမာဏ အများအပြားကို အသုံးပြုလိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် Glycogen သိုလှောင်မှုကို ပြန်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်း Glycogen ကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးခြင်းက recovery process ကို စတင်စေပါတယ်။ ဒီလို ဖြည့်သွင်းပေးခြင်းကို မလုပ်ဆောင်ပေးရင်တော့ သင့်ရဲ့ ရလဒ်ကို နှောင့်နှေးပါစေလိမ့်မယ်။ ခရီးရှည်ကြီး မောင်းနှင်ပြီးတဲ့ ကားကို gas ပြန်ဖြည့်တဲ့ ဟာကို တွေးကြည့်ကြည့်ပေါ့။
သင့် workout order ကို ပြောင်းလဲပေးပါ ။ ။ Full-body workout လုပ်မယ်ဆိုတိုင်း အမြဲတမ်း ရင်အုပ်ကနေပြီး စမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ physique's symmetry ကို အကျိုးလျော့စေပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ major body parts သုံးခုဖြစ်တဲ့ chest, back, legs ကို အညီအမျှ ခွဲခြားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့ chest ကနေ စမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့ကျ back ကနေ စပေါ့။ အဲ့ဒီလိုပါ။ နောက်ပြီး abs တို့ calves တို့ကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့ မဖြစ်ဘူးနော်။
လေ့ကျင့်ခန်းများ ။ ။ အောက်မှာ သင့်အနေနဲ့ workout တစ်ခု စတင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလေး တချို့ကို ရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်နဲ့ သင့်တော်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေ။
• Bent-over barbell rows
• Alternate dumbbell curls
• Incline barbell presses
• Dumbbell presses
• Parallel-bar dips
• Lying dumbbell Extensions
• Behind Neck Presses
• Decline-bench crunches
• Rope crunches
Sample အနေနဲ့ Workout တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ routine ကိုတော့ ကိုယ့်ကို စီစဉ်ပါ။
1. Barbell Bench Press (Medium Grip) – 2-4 sets, 10-12 reps
2. Dumbbell Bench Press – 2-4 sets, 10-12 reps
3. Bent Over Barbell Rows – 2-4 sets, 10-12 reps
4. Barbell Curl – 2-4 sets, 10-12 reps
5. Triceps Dips – 2-4 sets, 10-12 reps
6. Hanging Leg Raise – 2-4 sets, 10-12 reps
7. Barbell Squat – 2-4 sets, 10-12 reps
8. Standing Calf Raise – 2-4 sets, 10-12 reps
အားလုံးဘဲ ကျန်းမာလှပစွာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Alex Aung at 3:04 AM